पिता कै लयमा यी स्टारका छोराहरु !! - Experience Best News from Nepal
रोनाल्डो जुनियर युभेन्ट्सको एकेडेमीमा ट्रेनिङ गर्छन् । उनले हालै बुबाले जस्तै ‘ओभरहेड किक’ मा गरेको गोल युट्युबमा भाइरल नै बन्यो । बुबाले जस्तै ७ नम्बरको जर्सी लगाउने उनले यू-९ को डेब्युमै चार गोल गरेका थिए । रोनाल्डो कहिलेकाहीँ छोरासँगै अभ्यास गर्छन् । फुटबल कौशल सिकाउँछन् ।
मेसीका छोरा थियागो भने एकेडेमीमा भर्ना भएका छैनन् । ‘थियागो पहिले खेल मन पराउँदैनथे,’ मेसीको भनाइ स्पेनी पत्रिका मार्काले लेखेको छ, ‘अहिले सबै खेल हेर्ने, मन पराउने भएका छन् । खेलको प्राविधिक पक्षबारे कुरा गर्छन् । पहिला मजस्तो थिएँ, छोरा त्यस्तै क्रेजी छन् ।’
मेसी र रोनाल्डोको उमेरमा जति अन्तर छ, संयोगले दुवैका जेठा सन्तानको उमेरमा पनि उति नै फरक छ । मेसीले १७ वर्ष र रोनाल्डोले १६ वर्षको उमेरमा व्यावसायिक फुटबलमा करिअर सुरु गरेका थिए । मेसीले क्लब फुटबलमा निरन्तर बार्साबाटै खेलिरहेका छन् । रोनाल्डोको चौथो क्लब हो, युभेन्ट्स । मेसीले ३४ र रोनाल्डोले २९ उपाधि जितेका छन् । दुवै सुपरस्टारले देश र क्लबका लागि ६ सयभन्दा बढी गोल गरेका छन् । वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड बालोन डि’अर ५-५ पल्ट जितेका कीर्तिमानी रोनाल्डो र मेसीकै पथमा छोराहरु आउँछन् भन्ने अहिले अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।
आखिर किन बेचे रोनाल्डोले बालोन डी’ओर, यस्तो थियो रोनाल्डोले बालोन डी’ओर बेच्नुको कारण !!